အာရှပစိဖိတျဒသေ အိမျခွံမွစြေေးကှကျရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကို လကျဝါးကွီးအုပျထားတဲ့ မွို့ကွီး (၁၀) မွို့။ – SoShwe
Home/Home & Property/အာရှပစိဖိတျဒသေ အိမျခွံမွစြေေးကှကျရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကို လကျဝါးကွီးအုပျထားတဲ့ မွို့ကွီး (၁၀) မွို့။
အာရှပစိဖိတျဒသေ အိမျခွံမွစြေေးကှကျရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကို လကျဝါးကွီးအုပျထားတဲ့ မွို့ကွီး (၁၀) မွို့။
So Shwe February 20, 2021	Home & Property Leaveacomment
Urban Land Institute (ULI) နဲ့ PwC တို့ ပူးပေါငျးထုတျဝခေဲ့ပွီး ၂၀၂၀ ခုနှဈအတှငျး လူသိမြားကြျောကွားတဲ့ အာရှပစိဖိတျဒသေ အိမျခွံမွစြေေးကှကျဆိုငျရာ အစီရငျခံစာကို အခွခေံပွီးပွောရမယျဆိုရငျ တရုတျနိုငျငံက Shenzhen ၊ Shanghai နဲ့ Guangzhou တို့ဟာ အာရှပစိဖိတျဒသေ အိမျခွံမွစြေေးကှကျရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကို လကျဝါကွီးအုပျထားတဲ့ မွို့ကွီး ၁၀ မွို့ထဲမှာ ပါဝငျနပေါတယျ။
အာရှပစိဖိတျဒသေ အိမျခွံမွစြေေးကှကျရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကို လကျဝါကွီးအုပျထားတဲ့ မွို့ကွီး ၁၀ မွို့ရဲ့ နံပါတျ ၆ေ နရာမှာ ရပျတညျနတောကတော့ Shenzhen မွို့ဖွဈပွီး အရငျတုနျးက Shenzhen မွို့ဟာ စကျရုံမြားတညျထောငျရာ နယျမွတေဈခုဖွဈခဲ့ပွီး ယခုခြိနျမှာတော့ တရုတျနိုငျငံရဲ့ ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာ အခကျြအခြာကတြဲ့မွို့ဖွဈလာပါတယျ။
Shanghai မွို့ဟာလညျး နံပါတျ ၇ နရောမှာရပျတညျနပွေီး တရုတျနိုငျငံရဲ့ ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာ အခကျြအခြာကတြဲ့ မွို့ဖွဈတဲ့အပွငျ နိုငျငံတကာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှေ အာရုံစိုကျရာမွို့လညျး ဖွဈပါတယျ။ နံပါတျ ၉ နရောမှာရပျတညျနတေဲ့ Guangzhou မွို့ကတော့ အခွခေံအဆောကျအအုံမြား တညျဆောကျခွငျးဖွငျ့ အကြိုးအမွတျအမြားအပွားရရှိနိုငျတဲ့ မွို့တဈမွို့ဖွဈပါတယျ။
ဒါဆိုရငျတော့ ကနျြတဲ့ကမ်ဘာပျေါက ဘယျမွို့တှကေ အာရှပစိဖိတျဒသေရဲ့ အိမျခွံမွစြေေးကှကျရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကို လကျဝါကွီးအုပျထားတဲ့ မွို့ကွီး ၁၀ မွို့ထဲမှာ ပါဝငျမလဲဆိုတာကို ဆကျလကျကွညျ့ရအောငျနျော။
နံပါတျ (၁၀) တောငျကိုးရီးယားနိုငျငံက Seoul မွို့။
နံပါတျ (၉) တရုတျနိုငျငံ တောငျပိုငျးက Guangzhou မွို့။
နံပါတျ (၈) ဂပြနျနိုငျငံက Osaka မွို့။
နံပါတျ (၇) တရုတျနိုငျငံက Shanghai မွို့။
နံပါတျ (၆) တရုတျနိုငျငံက Shenzhen မွို့။
နံပါတျ (၅) ဩစတေးလနြိုငျငံက Melbourne မွို့။
နံပါတျ (၄) ဩစတေးလနြိုငျငံက Sydney မွို့။
နံပါတျ (၃) ဗီယကျနမျနိုငျငံက Ho Chi Minh မွို့။
နံပါတျ (၂) ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ မွို့တျောTokyo မွို့။
နံပါတျ (၁) Singapore မွို့။
အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံတဈနိုငျငံဖွဈတဲ့ စငျကာပူနိုငျငံကတော့ အိမျခွံမွစြေေးကှကျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှေ အထူးစိတျဝငျစားတဲ့ ထိပျဆုံးနရောကနေ ရပျတညျနပေါတယျနျော . . .
အာရှပစိဖိတ်ဒေသ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ မြို့ကြီး (၁၀) မြို့။
Urban Land Institute (ULI) နဲ့ PwC တို့ ပူးပေါင်းထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း လူသိများကျော်ကြားတဲ့ အာရှပစိဖိတ်ဒေသ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကို အခြေခံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံက Shenzhen ၊ Shanghai နဲ့ Guangzhou တို့ဟာ အာရှပစိဖိတ်ဒေသ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို လက်ဝါကြီးအုပ်ထားတဲ့ မြို့ကြီး ၁၀ မြို့ထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
အာရှပစိဖိတ်ဒေသ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို လက်ဝါကြီးအုပ်ထားတဲ့ မြို့ကြီး ၁၀ မြို့ရဲ့ နံပါတ် ၆ေ နရာမှာ ရပ်တည်နေတာကတော့ Shenzhen မြို့ဖြစ်ပြီး အရင်တုန်းက Shenzhen မြို့ဟာ စက်ရုံများတည်ထောင်ရာ နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုချိန်မှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အချက်အချာကျတဲ့မြို့ဖြစ်လာပါတယ်။
Shanghai မြို့ဟာလည်း နံပါတ် ၇ နေရာမှာရပ်တည်နေပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အချက်အချာကျတဲ့ မြို့ဖြစ်တဲ့အပြင် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ အာရုံစိုက်ရာမြို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် ၉ နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့ Guangzhou မြို့ကတော့ အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် အကျိုးအမြတ်အများအပြားရရှိနိုင်တဲ့ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်မြို့တွေက အာရှပစိဖိတ်ဒေသရဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို လက်ဝါကြီးအုပ်ထားတဲ့ မြို့ကြီး ၁၀ မြို့ထဲမှာ ပါဝင်မလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ကြည့်ရအောင်နော်။
နံပါတ် (၁၀) တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံက Seoul မြို့။
နံပါတ် (၉) တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းက Guangzhou မြို့။
နံပါတ် (၈) ဂျပန်နိုင်ငံက Osaka မြို့။
နံပါတ် (၇) တရုတ်နိုင်ငံက Shanghai မြို့။
နံပါတ် (၆) တရုတ်နိုင်ငံက Shenzhen မြို့။
နံပါတ် (၅) ဩစတေးလျနိုင်ငံက Melbourne မြို့။
နံပါတ် (၄) ဩစတေးလျနိုင်ငံက Sydney မြို့။
နံပါတ် (၃) ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက Ho Chi Minh မြို့။
နံပါတ် (၂) ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်Tokyo မြို့။
နံပါတ် (၁) Singapore မြို့။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံကတော့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ အထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာကနေ ရပ်တည်နေပါတယ်နော် . . .
Previous ဝနျထမျးပေါငျး (၁,၀၀၀) ကြျောရှာဖှနေသေညျ့ ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာအကယျဒမီကြောငျး။
Next ဘဏျလုပျငနျးမြားလညျပတျနိုငျရနျအတှကျ ဆျောဒီအာရဗေအြစိုးရရဲ့အစီအစဉျ။